Igwe kwụ otu ebe na ọgba tum tum gị ga-abụ ihe ekele maka GObyLIVI | Akụkọ akụrụngwa
Igwe kwụ otu ebe na ọgba tum tum gị ga-ama ihe maka GObyLIVI
N'oge nke ugbu a, ihe niile na - abụ ihe amamihe: ekwentị ndị dị mma, elele amamịghe, ọkụ ọkụ ... Ma ọ bụrụ na ị nwere mmasị n'ịgba ịnyịnya ma ọ bụ na ịchọrọ "ịgba ọkụ ọkụ" n'okporo ụzọ awara awara ọgba tum tum, ọ dịtụla mgbe ị rọrọ nrọ ịnwe ọgba tum tum mara mma ma ọ bụ igwe kwụ ama?
Eleghi anya azịza nye ajụjụ a bụ mba na-enweghị atụ, agbanyeghị, ka mgbe ihe a nile gasịrị bụ "Ngwa Ngwa" na, oge ụfọdụ, anyị amaghị maka mkpa anyị ruo mgbe anyị ga-abanye n'ime oge, taa anyị ga-ewetara gị ngwa, ọma, n'ezie e nwere atọ, nke ka dị na oru ngo frasi ga-eme ka gị igwe kwụ otu ebe ma ọ bụ ọgba tum tum smart. Nwere mmasị? You chọrọ ịmata? Mgbe ahụ, na-agụ.
A smart igwe kwụ otu ebe?
Ihe anyị na-ewetara gị taa Akụkọ akụrụngwa bụ ọrụ nchịkọta mmadụ nke anyị hụrụ na Kickstarter, ebe a maara nke ọma na nke a ma ama maka ụdị ọrụ nkwado ego niile. Ma ọ bụ “mgbochi” nke ahụ ga-enye ọgụgụ isi gị abụọ wheeler, bụrụ igwe kwụ otu ebe, skuuta ma ọ bụ ọgbatumtum na azọ ụkwụ n'iyi.
Ajụjụ buru ibu bụ ma ịchọrọ igwe gị ma ọ bụ ọgba tum tum gị ka ị mara ihe. Ihe kachasị dịrị nchebe bụ na ị tụleghị ya, m ga-anwa anwa ịsị ee e, na ọ dịghị mkpa. Agbanyeghị, ebe ụlọ ọrụ GObyLIVI siri ike, ha kpebisiri ike gbanwee ọ bụla ahụmahụ nkịtị na a smart ahụmahụ, na nke a, na ị nwere ike iji ikike nke ekwentị gị mee ka njem gị kwa ụbọchị ma ọ bụ oge ụfọdụ ka mma.
Nkwupụta nke GObyLIVI na-egosi anyị nwere ahụmịhe E kewara ya n'ime ọtụtụ ngwaọrụ, ọkachasị, atọ: GOMINI, GOHEADSET na GOHELMET. Echegbula, ị gaghị enweta ihe atọ ahụ, ọ bụ ezie na ọ ga-adị mma. Ngwaọrụ kachasị bụ GOMINI, ngwaọrụ nke ị nwere ike ijikwa site na ngwa GObyLIVI gọọmentị na ekwentị gị. Ma gịnị ka akụrụngwa a bụ n'ezie?
Dịka anyị siri kwuo, akụrụngwa kachasị na setịpụrụ a bụ GOMINI, ọ bụkwa a obere ihuenyo ị nwere ike idozi na njikwa nke ịnyịnya ígwè gị ma ọ bụ ọgba tum tum gị dị ka a ga-asị na ọ bụ mgbịrịgba ọnụ ụzọ. Ihuenyo a ọ ga-enye gị ọkwa dịgasị iche iche ma nye gị ohere ịnweta ọrụ niile nke ọrụ dị mfe. N'ihi obere ngwaọrụ a, ị ga-enwe ike ịkpọ oku ekwentị, zaa ma ọ bụ jụ oku, jikwaa ọkpụkpọ egwu yana, n'ezie, lelee amamọkwa, njirimara kpakpando nke ama ọ bụla bara uru maka nnu ya. Kedu ihe ga - abụ nke anyị ma ọ bụrụ na anyị anaghị anata ọkwa na oge niile! (Rịba ama). Ruo ugbu a, dị mma, ọtụtụ ọrụ agbanyeghị, njirimara nke ngwaahịa ọhụrụ a anaghị akwụsị ebe a. Gịnị nwere ike ime ka ọ mara ihe karịa?
Ngwa GObyLIVI nwere ike iji gyroscope wuru n’ime ekwentị mkpanaaka gị na chọpụta bumps na ọdịda mgbe ahụ, ọ bụrụ na ọ dị mkpa, ị nwere ike izipu ozi na ndi eyitere ihe mberede gi. Mana agala, a ka nwere ihe ndị ọzọ ".
Ka e were ya na ị gara ịzụ ịnyịnya ígwè, na ị megoro obere kilomita nke ọ na-ada ụbọchị ndị a. Mgbe ahụ, ngwa ga-adọkwa gị aka na ntị banyere mkpa ọ dị ịga ezumike, na ọ bụ na ike ọgwụgwụ bụ otu n’ime ihe na-akpata ihe ọghọm, ma na ọgba tum tum ma nke ụkwụ. N'ezie, GobyLIVI nwere ike chọpụta ọsọ ị na-ekesa ka ị dọọ gị aka na ntị a sị na ị gafeela ọsọ ọsọ.
Dika m kwuru na mbido, o nwere ike ịbụ na i cheghi banyere igwe kwụ otu ebe ma ọ bụ ọgbatumtum gị mara ihe, agbanyeghị, emesiri nke a, ejiri m n’aka na ọtụtụ n’ime unu ahụla uru ọ bara. N'ezie, kpachara anya na ọkwa dị n'okporo ụzọ, ekwensu na-ebu ha.
Ọ bụrụ n’ịchọrọ ịmụtakwu banyere ọrụ a GObyLIVI gaa na mkpọsa peeji nke na Kickstarter, ebe i nwere ike inweta ya ihe na-erughị euro iri asaa. Na mgbakwunye, ị nwekwara ike ịchọpụta ngwaọrụ ndị ọzọ enyere maka GEMINI.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Ngwa » Ngwa » Igwe kwụ otu ebe na ọgba tum tum gị ga-ama ihe maka GObyLIVI
Alaeze Obi 3 na Forza Motorsports 7 hapụ anyị ihe onyonyo izizi ha